Maxkamada Maamulka & Madaniga Victoria - Tenants Victoria
Victorian Civil and Administrative Tribunal (Residential Tenancies List) waxay dhageysataa muranka u dhaxeeya mulkiilayaasha iyo kireystayaasha. Maxkamad ma aha laakiinse waxay awoodaa inay gaarto go’aamo sharci ahaan la dhaqan gelin karo. Waxaa loogu talagalay inay noqoto mid aan toos ahayn raqiisna ah, si loogu xaliyo muranka si caddaalad ah dhakhsana ah.
Waxaad ka dalban kartaa Maxkamada haddii wax dhib ah ay kaa heysato mulkiilahaaga oo aadan xalin karin. Waxaa fiican inaad iskudeydo oo aad xaliso dhibkaaga adoo la hadlaya mulkiilahaaga ama wakiilka guriga ka hor intaadan maxkamada dalban. Haddii aad go’aansato inaad dooneyso inaad dalbato, waa inaad ka heshaa tallo Tenants Union Victoria/Tenants Victoria.
Si aad u sameyso codsi, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso foomka codsiga ee Victorian Civil and Administrative Tribunal oo laga heli karo Tenants Union/Tenants Victoria ama Maxkamada. Raac tilmaamaha foomka dushiisa ku qoran. Waa inaad hubisaa meesha foomku kugu weydiiyo magaca mulkiilaha, waa inaad ku qortaa magaca mulkiilaha mana magaca wakiilka guriga. Haddii mulkiilaha yahay shirkad, ku dar ACN. Haddii aad tahay kireyste dadweyne, mulkiilahaagu wuxuu noqonayaa Agaasimaha Guriyeynta.
Waa inaad u dirtaa nuqulka codsigaaga mulkiilaha, iyadoo la doorbidayo inuu ahaado warqad diiwaangashan. Xafido caddeynta warqada iyo nuqulka codsigaaga.
Ogeysiiska dhageysiga Maxkamada
Waxaad ka heli doontaa ogeysiiska Maxkamada oo kuu sheegaysa wakhtiga iyo goobta dhageysiga maxkamadu ka dhacayo. Inta wakhti ah ee aad sugeyso maxkamada wuxuu ku xiran yahay nooca codsiga iyo siday Maxkamadu mashquul u tahay.
Haddii aadan awoodin inaad tagto Maxkamada maalinta dhageysiga maxkamada, waxaad u baahan doontaa inaad tallo ka hesho Tenants Union/Tenants Victoria ku saabsan codsiga dib u dhigista. Codsiga dib u dhigista waa in la sameeyaa ugu yaraan 2 maalmood oo shaqo ka hor maalinta maxkamada dhaceyso waana in lagu xoojiyaa dukumiinti ( sida warqad caafimaad), ma jirto wax ballanqaad ah oo ah in lagu siiyo dib u dhigistaan, laakiinse waxaa jira fursad wanaagsan oo ay leedahay haddii uu ogolaado mulkiilahaagu.
haddii aad u baahan tahay turjumaan, waa inaad la xiriirtaa Maxkamada ka hor taariikhda Maxkamada si aad ugu sheegto. Maxkamadu waa inay kuu soo ballamisaa turjumaan, haddii kale waa inaad weydiisataa dib u dhigis.
Markaad geysato codsi maxkamada, masuul adigaa ka ah inaad caddeyso kiiskaaga. Taas micnaheedu waxaa weeye waa inaad keentaa caddeyn aad ku xoojineyso waxaad sheeganeyso. Nooca caddeynta ee loo baahan yahay waxay ku xiran tahay xaallada ka eeg A Day at the Bench’ DVD Kit ama Tribunal Hearing Checklist wixii tallo ah ee nooca caddeynta ee aad keenaysid maxkamada dhageysigeeda, ama kala xiriir Tenants Union/Tenants Victoria wixii tallo ah.
Dhageysiga maxkamada ka hor, waa inaad nuqul ka sameysaa wixii waraaqo ah ama dukumiinti ee aad dooneysid in Maxkamadu aragto, oo aad soo ballansataa wixii markhaatiyaal ah inay yimaadaan maxkamada. Maxkamada kiiskaaga dib u dhigi meyso sababtoo ah ma heysatid markhaatiyaal ama dukumiintigaagii awgeed, ma sameyn doontid taleefan si aad u caddeysid waxaad sheeganeyso.
Waxaa wanaagsan in qof caddeyn bixiyo meeshii aad isku haleyn lahayd warqad ama warqad dhaar ah. Haddii markhaatigu diido inuu yimaado maxkamada oo aad rumeysan tahay in caddeyntoodu inay muhiim tahay, waxaad weydiin kartaa Maxkamadu inay Markhaatiga u yeerto. Ogsoonow in Maxkamada laga yaabo inay amarto inaad bixiso kharashka safarka ee markhaatiga iyo/ama gunnooyin kale. Waa inaad dalbataa in loo yeero ka hor taariikhda maxkamada. Kani waa amar in qofi yimaado maxkamada oo uu caddeyn bixiyo. Haddii kale, markhaatigu wuxuu ku bixin karaa caddeyntiisa warqada dhaarta (oo laga heli karo badiba dukaamada wargeysyada)
Si aad isugu diyaariso dhageysiga maxkamada, waa inaad sameysaa qoraal kooban oo dulmaraya waxaad dooneysid inaad tiraahdo, oo uu ku jiro liiska dukumiintiyada aad dooneysid inaad maxkamada tustid. Inaad soo diyaargarowdo waxay fure u tahay soo jeedinta kiis wanaagsan.
Guud ahaan, dhinac kastaa waxaa looga baahan yahay inay maxkamada u soo gudbiyaan kiiskooda. Si kastaba ha ahaatee waxaa laga yaabaa inuu ku metelo u doode aqoon leh (sida shaqaalaha kireystayaasha) marka:
mulkiiluhu uu isku deyayo inuu guriga kaa saaro
mulkiiluhu uu yahay doode aqoon leh
mulkiilaha uu metelayo udoode aqoon leh
Maxkamadu waxay kuu ogolaaneysaa in sharci ahaan lagu metelo
Haddii aad rumeysan tahay inaad u baahan doonto in lagu metelo, waa inaad la xiriirtaa Tenants Union/Tenants Victoria sida ugu dhakhsaha badan ee aad u hesho Ogeysiiska dhegeysiga maxkamada. Waxaad sidoo kale ka doonan kartaa tallo iyo haddii ay suurtogal tahay in lagu metelo sharci yaqaanka heeganka ah ee Maxkamada.
Waa inaad hubisaa inaad maxkamada ku timaado wakhti. Haddii aad soo daahdo, dhageysiga maxkamadu wuu soconayaa adiga la’aantaa saa daraadeed qorshee inaad ugu yaraan ku timaado 15 daqiiqo ka hor wakhtiga maxkamada.
Ka dib markaad u sheegto shaqaalaha miiska hore inaad timid, waxaa lagaaga yeeri doona qolka maxkamada. ‘Xubinta’ (qofka kiiskaaga go’aanka ka gaari doona) ayaa adiga iyo mulkiilaha idin weydiin doona inaad ku dhaarataan Kitaabka ama caddeysaan inaad runta sheegi doontaan.
Sida kiiskaaga loo dhageysan doona waxay ku xirnaan doontaa Xubintaa gaarka ah ee dhageysata kiiskaaga, si kastaba ha ahaatee badanaa qofka codsiga keenay ayaa la weydiinayaa inay kiiskooda marka hore soo jeediyaan.
weligaa ha xannaaqin. Doodaadu ha caddaato hana ku wajahnaato qodobka dooda iskuna day inuusan mulkiiluhu ku baqdin gelin, wakiilka ama Xubinta Maxkamada. Waa inaad hubisaa in lagu siiyo fursada aad ku sheegayso wax kasta oo aad isleedahay waa khuseysaa kiiskaaga ka hor inta Xubintu aysan gaarin go’aanka.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ah sidii aad isugu diyaarin lahayd dhageysigaaga Maxkamada eeg ‘A Day at the Bench’ DVD Kit ama Tribunal Hearing Checklist, oo laga helayo Ururka Kireystayaasha.
Ka dib markuu dhageysto labadiinada adiga iyo mulkiilaha ama wakiilka, Xubinta Maxkamadu waxay sameyn doontaa ‘amar’ kaas oo ah go’aanka kiiskaaga. Haddii aadan fahmin amarka, weydii Xubinta inay si tartiib ah kuugu sharaxdo. Waxaa laguu soo diri doona nuqul qoraal ah oo amarka ah laba toddobaad ka dib maxkamada. Waxaad weydiin kartaa Xubinta in lagu siiyo sababo qoraal ah oo go’aankooda ku saabsan, laakiinse waa inaad weydiisataa sababo qoraal ah ka hor intaan maxkamadu dhammaan. Maxkamadu waa inay sababaha bixisaa 60 maalmood gudahood markay amarka gaarto.
Haddii aadan ku faraxsaneyn go’aanka ay Maxkamadu gaartay, waxaad sameyn kartaa racfaan laakiinse xaallado xaddidan oo kaliya. Racfaanada waa in lagu sameeyaa Maxkamada Sare taasina waxay noqon kartaa mid aad qaali u ah. Waa inaad soo xareysaa racfaankaaga 28 maalmood gudahood taariikhda amarka. Haddii aad dooneysid inaad racfaan qaadatid, waa inaad tallo ka heshaa Ururka Kireystayaasha sida ugu dhakhsaha badan.
Furan 9.00 subaxnimo ilaa 4.30 galabnimo Isniinta ilaa Jimcaha
La daabacay: Disembar 2011
The Victorian Civil & Administrative Tribunal | Somali | December 2011